Otú Ọsụ Ụzọ Ahụ́ Na-adịchaghị Ga-esi Na-aruzu Awa Ya
Onye chọrọ ịsụ ụzọ oge niile ga-ebu ụzọ hazie oge ya nke ọma. Ọ bụrụ na ị ga-arụtali awa iri na asatọ kwa izu, ị ga-abụli ọsụ ụzọ oge niile, gị enweekwa oge ị ga-eji na-ezu ike. Ọ bụrụ na ị hazie oge gị nke ọma, ị ga na-arụzu awa gị n’agbanyeghị mmiri ozuzo ma ọ bụ ọrịa. Ihe dị́ n’okpuru ebe a nwere ike inyere ndị chọrọ ịsụ ụzọ aka ịna-arụzu awa ha n’agbanyeghị ma hà ji ụbọchị niile dị n’izu akpa afọ ha ma ọ̀ bụ na ha ejighị, ma ahụ́ ọ̀ gbasiri ha ike ma ọ bụ na ahụ́ na-enyetụ ha nsogbu. Unu hazie ihe ụfọdụ n’ezinụlọ unu, otu onye n’ime unu nwere ike ịmalite ịsụ ụzọ n’ọnwa Septemba. Unu nwedịrị ike ikwurịta ya n’ofufe ezinụlọ unu.
ANAGHỊ M AGA ỌRỤ ỤBỌCHỊ NIILE
M NA-AGA ỌRỤ ỤBỌCHỊ NIILE
ỌMỤMỤ IHE ETITI IZU
AHỤ́ ADỊCHAGHỊ M
ỤBỌCHỊ M JI EZU IKE
mailto:?body=Otú Ọsụ Ụzọ Ga-esi Na-arụzu Awa Ya%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D202016247%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Otú Ọsụ Ụzọ Ga-esi Na-arụzu Awa Ya